Akpọrọ m GoDaddy asị. M mere n'ezie. Enweghị m ike ikwenye na akara nwere ike imefu ọtụtụ nde dollar na-egbu maramara cleavage ma gaa n'ihu na-ewulite nnukwu azụmahịa. Ọ bụ ụra n'ihu ndị na-ere ahịa bụ ndị rụsiri ọrụ ike iji mee ka ụdị ha dị mkpa, nke nghọta, ọkachamara na enyemaka nye ndị na-ege ha ntị. Ọ bụ ụzọ dị mfe out na o yiri ka ọ na-arụ ọrụ. Agwara m ndị ahịa m niile ka ha jiri ọrụ ndị ọzọ wee pụọ.
Otú ọ dị, ka oge na-aga, ọtụtụ ndị ahịa anyị ndị iji GoDaddy. Ọ bụghị naanị na ha ji ọrụ ahụ, ha na-agwa m lee ka nnukwu ọrụ ndị ahịa si dị ukwuu site na ụlọ ọrụ ahụ bụ n'ezie. Ya mere n'otu akụkụ bụ ụlọ ọrụ na-elekọta ndị ahịa ya na ọrụ ọ na-enye… na nke ọzọ bụ ụdị mgbasa ozi na mgbasa ozi nke na-eto eto na isi efu.
Ma ebili mmiri na-atụgharị. Enyi Christopher Carfi (onye sonyeere ndị otu GoDaddy) kpọtụrụ m na Onye isi nchịkwa ndị na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze, Susie Penner na mụ na Chief Communications Officer na-akparịta ụka Karen Tillman. Nke ahụ ziri ezi… a Susie na a Karen na-eduga nkwukọrịta ọhụrụ! Karen abụghị naanị nwanyị nọ n'ọchịchị ndị okenye. Blake Irving, onye isi ọhụụ GoDaddy họpụtara na mbubreyo 2012 na-eme ọtụtụ mgbanwe na ụlọ ọrụ na-eme ka ụdị… na ugbu a GoDaddy na-akwadebe maka IPO ha.
Mgbasa ozi GoDaddy na-agbanwekwa! Ha weputara mgbasa ozi SuperBowl a nke na-enye ndi mmadu ihe omuma di iche na GoDaddy na enyere ndi mmadu aka ime ka nrọ ha buru ahia:
Na ịrịba ọrụ - si ngalaba, mba, Ejikwa Bochum Bochum, Asambodo SSL, Microsoft Office 365 na-akwado, Ndenye ego na ntanetịnwere weebụsaịtị Nrụpụta, ecommerce na Mmemme Nchọta ObodoGoDaddy nwere ngwa ọrụ kachasị dị ọnụ ala nke ndị obere azụmaahịa nwere. Dakọtara na nnukwu ọrụ ha ma enwere m obi ike na ha na-aga n'ụzọ ziri ezi.
Tags: Blake Irvingceo godaddyChristopher carfigodaddyonyinye ihu ọha mbụipoKaren Tillmansusie pennerIhe GoDaddy nke Kick Ass